Okhanga, elikhanyayo, ukugcona, abasha flirty - lokho "Amor Amor", imimoya, okuyizinto ezihlobene intsha nothando. Kodwa kuyinto amakha ayo kungabangela kuphela injabulo? Mhlawumbe, lezi amaphunga abekho, ngoba abantu abaningi, imicabango yabantu abaningi kangaka. Zama ukuchaza "Amor Amor" ngelinye ihlo ngokuphelele.
"Amor Amor": amakha elixir lothando. umbono umenzi
Imimoya "Amor Amor" impumelelo yayo kubangelwe umkhankaso ekhuthele kakhulu. Ukuqabula mbhangqwana, ephelezelwa ibhodlela obomvu, abakhona ngokoqobo nomaphi: kumabonakude, phezu amabhanela ukukhangisa, komagazini ecwebezelayo. Akumangalisi ukuthi amantombazane ezweni lethu, hhayi okwamanje amathani saphenduka yokukhangisa, masinyane waphuthuma ukuthenga "Amor Amor", ngokungazi bekholelwa ukuthi le Iphunga izabehlisela impumelelo nabobulili obuhlukile. Ngokusho umenzi, "Amor Amor" - ubeqhakambisa intsha nesilingo, emangalisayo ezikhangayo, ngokugqamile nesithombe elikhanyayo. Lona uthando ukuthi sonke sifuna ebusheni babo: ezimkhanukelayo, abanothando kakhulu, igcwale injabulo ezingalawuliwe, ekujabuleleni nobumsulwa. Intombazane igqoka lokhu Iphunga - winner, ke edonsela wonke umuntu.
"Amor Amor" - amakha of Cacharel. umbono fans
Imibono mayelana ukunambitheka Cacharel "Amor Amor" ngempela ngazwilinye: kuba mnandi kakhulu futhi zemvelo. Kungakhathaliseki ukuthi yabamakethi uthi, kubalulekile ukuthi bamakha udale umkhiqizo izinga. Lokhu Iphunga esiphundu, wonke amanothi umsindo zemvelo kakhulu futhi liyabonakala. Kala ngokwakho lokhu ithrekhi: ibhilikotsi, black currant, kancane ezisawolintshi fresh. Zonke kwahambisana amnandi izimbali: jasmine, rose, lily white. I database - amber inkanuko must nemisedari efudumele, tonka emabhontjisi vanilla, okuyinto njalo unikeza ubumnandi balolo umsungulo, roundness, ukuphelela, futhi ezinye izinhlobo wakhe wokuzizwa ewutho. Lihambisana vanilla ubhontshisi mncane kubangcono ngisho, hhayi njengoba confectionery ... Kubonakala sengathi amanothi kalula, kodwa akuyona ukunambitheka ngokujulile ngakho, ivolumu, ezinamandla futhi livikela kakhulu. Vanilla kuyinto emnandi, kodwa umsuka nge ukufutheka kancane evimbela iphunga okusikhumbuza ebhikawozi. Intombazane igqoka lokhu Iphunga kungenzeka bafuna ukuheha abantu noma ungafuni, noma kunjalo, ngeke zivela ngephunga elimnandi kakhulu ongenza isifiso.
"Amor Amor": Imimoya Mystery? umbono okubhekenwe
Labo sebekubeke ungathandi "Amor Amor", kungasiko. Kunalokho, nanso are labo wayezazisa izinga lemikhiqizo kusukela Cacharel, kodwa wathi: ". Akukona okwami" Yebo, igama umsindo othakazelisayo kakhulu, kodwa kungcono iphunga sexy, ngempela? Bouquet abanonya, injabulo omuhle, elikhazimulayo ... akukho kungabaza, ezikhangayo, kodwa nibe msulwa + futhi bengabanakile nhlobo elingenalo avuthiwe, Ukuthoma, isilwane nezocansi. Akazange asuthise ukufisa ukuba owesifazane ongaqondakali futhi ezicashile, ngempela kokuvamile eziyigugu kabani Ukwanelisa inkanuko asimemezi mayelana uqobo. Ngaphezu kwalokho, wathi ukunambitheka kudinga nokushintsha kokudla nokufakwa esinembile, kungenjalo iba cloying, angafi futhi isimo ecasulayo. Eziningi zalezi "ukukhula" kuyo, futhi, ebheka emuva, uthi, "Ngiyithandile, kodwa manje Ngithanda into kancane more xaka." Futhi, omunye kungaba ngokuvamile ukuzwa: "O, ukube nje wayengasekho ethandwa kangaka ...". Ngakho, intombazane enyula lo Iphunga (kusukela umbono emakhosazaneni badumazeke) - lokhu umuntu olukha phezulu kakhulu, ake esikhanyayo futhi ekhangayo, kodwa akuyona indaba yokuba namakhono nesithakazelo esijulile.
Ngakho ubani "Amor Amor"? Njengoba benamagangangozi, yesimanje kanye ekhangayo amantombazane, abalandeli yokuhogela esihlwabusayo ezihlekisayo Akukho okudlula, walahla linesizotha, kancane ukunambitheka ukuzikhohlisa, switch kokuthile eyinkimbinkimbi ngaphezulu ... noma simpleton ukuzikhohlisa, abakholelwa ukuthi isiketi esifushane, abancane ukumamatheka - ke sika konke isidingo zidonse ukunaka kwanoma amadoda? Mhlawumbe akekho noma omunye, ngoba omunye futhi efanayo umphetho iDemo Ungabheka ngendlela ehluke kakhulu. Konke kuncike kuphela umuntu ogqoka ke.
Wax ishiya ipensela: i Uhlolojikelele, isicelo ubuchwepheshe nabathengisi kanye nokubuyekeza
Ukhilimu Anti-cellulite: Izibuyekezo uzame
Ukuhlola Izinyawo Zakho - I-Ballet Izosiza!
Kungani revaluation kwempahla fixed?
Ukudla ehlukile kwesisindo
I ibhulakufesi ekahle umsoco ofanele
Uyini umsebenzi: ngezinyawo, noma icala?